အလုပ်ရှာဖွေသူနှင့်အလုပ်ရှင်များအဘို့ဘယ်နေရာမှာမဆို Randstad ကုမ္ပဏီသှနျသငျ
၏တဦးတည်းဘယ်နေရာမှာမဆိုသှနျသငျ ယူအေအီးအတွက်ဆရာ, ဆရာမများအတွက်အကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကဒီကုမ္ပဏီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ဒီကုမ္ပဏီ လူတွေနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဖို့ကူညီပေးနေ ဆရာအဖြစ်။ ထို့အပြင်ဤကုမ္ပဏီအောက်မှာ Randstad အားဖြင့်ကြီးကြပ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီအဖွဲ့အစည်းအထောက်အထားများဖြစ်ပါသည် အလွန်အမင်း appropriated.
ဆရာဈေးကွက်ထဲမှာအလုပ်တစ်ခုရဖို့သင်တစ်ဦးအကူအညီလိုအပ်နေသည်။ အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာအတွက် ဆရာ, ဆရာမများနှင့်တက္ကသိုလ်စျေးကွက်။ ကျိန်းသေ, သင်ဘယ်မှာအလုပ်မျိုးရရန်ထိမှသိကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သွန်သင်ချက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းငှားရမ်းသည်။ ဒါကြောင့်သင်လျှင် မသာပြည်ပမှာအလုပ်ရှာနေဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက် ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အလုပ် site ကိုသင်ကူညီရန်ဒီနေရာကိုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့၏ စုဆောင်းမှုအသင်း ဒီကုမ္ပဏီ check လုပ်ထားနှင့်ကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုသင်ဆရာမအဖြစ်အလုပ်ရှာနေလျှင်သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပေးခဲ့သည်။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုသွန်သင်ချက်နဲ့ သငျသညျကောင်းစွာ-paid အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရှာတှေ့နိုငျ။ က Randstad ကုမ္ပဏီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကကုမ္ပဏီဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်.
ဒီအလုပ်ဆိုက်နှင့်, သင်တို့သည်ဤလောက၏ကျွန်တော်သင်ပေးလို့ရပါတယ် တှငျနထေိုငျကာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေ။ အထူးသဖြင့်တစ်ဦးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆရာအဖြစ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သငျသညျအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာဆရာအဖြစ်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီအသစ်ကစီမံကိန်း အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့.
သငျသညျကိုနိုင်ငံတကာသင်ကြားမှုရှာနေနေတယ်ဆိုရင် ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ သင်ဤကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှုနှင့်သူတို့သည်သင့်ကိုကူညီတိုက်ပွဲများမှာရပ်တန့်ကြသည်မဟုတ်ကြောင့်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပမှာအလုပ်အကိုင်နေရာရဲ့အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးတစ်ခုမှာ။ သူတို့ပေးအဆိုပါအခန်းကဏ္ဍသည်လည်းသင်တို့ကိုကူညီထောကျပံ့များပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများမှအကူးအပြောင်းများနှင့်နိုင်ငံခြားတွင်နေထိုင်နေနှင့်အတူ။
ဒါကကုမ္ပဏီကဒီဆယျ့သုံးနှစ်ကြာ operating ။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, လုပ်ဆောင်ချက်၏အစီအစဉ်အတွင်း operating။ အဆိုပါသင်ကြားမှု ကမ္ဘာတဝှမ်းအလုပ်အကိုင်များ အဆိုပါတိုက်ကြီးကျော်နေဆဲဖြစ်သည်။ သွန်သင်ချက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကျောင်းသားများသည်တရုတ်ထံမှလာရန်ကူညီခြင်း ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားမှ။ ဒူဘိုင်းကနေဟောင်ကောင်နှင့်ဘာရိန်းမှစင်္ကာပူရန်။ သူတို့ကအစရှိပါတယ် ကာတာနိုင်ငံနှင့်အတူထူးခြားအလုပ်လုပ်ကိုင် စျေးကွက်မဩဝါဒပေး။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာရန်ဤကုမ္ပဏီအသုံးပြုတဲ့အခါ။ ကျိန်းသေ, ဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီကျွမ်းကျင်သူမျက်စိနှင့်ဒေသခံအသိပညာနှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆိုငျသညျကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ယခုအချိန်တွင်သူတို့ဖြစ်ကြသည် 100 အလုပ်အကိုင်များကျော်ရှိခြင်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲကနေပူဇော်.
သူတို့ဖြစ်ကြသည်နေရာတိုင်းမှာသူတို့ကဆရာ, ဆရာမကူညီပေးနေ ကမ်ဘာပျေါတှငျအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့။ ဒါကကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆုံးဖွယ်ရှိသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ Randstad ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ် name ကိုအောက်မှာတစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည်။ သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုပူဇော်သက္ကာနှင့်တကွ အသစ်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများများအတွက်စစ်မှန်သောဘဝအတှေ့အကွုံ။ အမြဲတမ်းကအခြားအလုပ်ရှင်နှင့်အတူဖတ်ရှုခြင်း။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုမကုမ္ပဏီအများအပြားနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆရာများအတွက်ထိုသို့ပြုကြ၏။ ဒါကြောင့်ကောင်းလှ၏ အသစ်နှင့်လက်ရှိကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်.
ဒီကုမ္ပဏီကိုအတူတက်လက်မှတ်ထိုးရန်ဆန္ဒရှိနေသောဆရာများ။ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ် နှင့် အနေအထားအနည်ထိုင်ခြင်းနှင့်လုံခြုံရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ တစ်ဦးဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ပြည်ပရှိကြုံတွေ့နေကြသည်လျှင်သင်ဖြစ်ကြ၏ကြီးမားတဲ့အကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရည်အချင်းနှင့်မျှော်လင့်ချက်များအပေါ် အခြေခံ. ဒီကုမ္ပဏီကိုသင်ပြပါလိမ့်မယ် သင်မည်သို့အလုပ်ယူအေအီးအတွက်ကမ်းလှမ်းရှာတှေ့နိုငျ.
ထိုမှတပါး, သင်သည်တတ်နိုင် စကားတော်အခွင့်အလမ်းများဆွေးနွေးရန် သွန်သင်ချက်နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆို။ ဒါကကျောင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များပံ့ပိုးပေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကကုမ္ပဏီတိုင်းကြောင်းနားလည်နိုင် ကျွမ်းကျင်သူများ သွန်သင်သူတို့၏လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့သင်သေချာနိုင်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ထားသည့်အင်္ဂါရပ်များ၏အရင်းအမြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘို့ကောင်းလှ၏ သှနျသငျဘယ်နေရာမှာမဆိုကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ သင်၏အသက်တာ၌တည်ငြိမ်မှုများကိုပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးက ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအင်တာဗျူးအတွက်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာ ယူအေအီးအတွက်ဆရာ။ ကျိန်းသေကြောင့်သင်တို့အဘို့အရှာနေရပါမည်အရာဖြစ်တယ်။
သူတို့ကအစပေး အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပူဇော်။ လုပ်ဆောင်ချက်အသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်သူအစီအစဉ်၏ရှေ့တော်၌, သငျသညျအံ့သြဖွယ်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရှာတှေ့နိုငျ ဆရာအဖြစ်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်အချို့သောသူတို့အဘို့အပေးရှိလိုအပ်သည်။ နှင့်သင့်အရည်အချင်းများသူတို့ကိုယ်သူတို့ရေးသင့်တယ် သင့်ရဲ့ပညာရေးအရည်အချင်းများနှင့် ပတ်သက်..
ဒါကကုမ္ပဏီအများအပြားအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုအတွင်း operated ။ သူတို့ကအစအပေါ်ဥပမာသင်တို့အဘို့အခမဲ့အကြံပေး ဒူဘိုင်းလေဆိပ်အလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်။ သင်သည်ထိုသူတို့မခေါ်ပါသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကတောငျးဆိုခကျြကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ထိုအဖြစ်ရပ်အများစု၌, အလုပ်ရှာဖွေသူများအလွန်ကောင်းသောအနေအထားကိုရှာဖွေနိုင်ကြသည် နိုင်ငံတကာမှာဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။
လူအများ၏အများစုမှာဖြစ်ကောင်းဤမေးခွန်းကိုမေးပါလိမ့်မယ် ?. သို့သော်အဖြေကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ပေးဖို့အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် သင်တစ်ဦးကူညီပေးနေလက်ပေးခြင်း။ သူတို့တည်ငြိမ်ဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦး function ကိုယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လာမယ့်ဆရာဖြစ်လာကြသူလူများအများစုမှာ။ ဒါပေမယ့်ဖွင့်အဲဒါကိုလွယ်ကူသည်မဟုတ်ဤသည်နေ့ရက်ရင်ဆိုင်ရပါစေ။ ဒါပေမဲ့ ဤမျှလောက်များစွာသောအံ့သြဖွယ်သောနေရာများရှိပါသည် သင်သည်သင်၏ကျောင်းသားများကိုသင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာဘရူနိုင်းသည်နှင့်လည်းဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ပေး တောင်အာဖရိကများအတွက်စုဆောင်း။ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့, ဒီကုမ္ပဏီရှိခြင်း ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများ.
ဤသည်အံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီကိုလည်းလုပ်ဆောင်နေ ခေါင်းဆောင်မှုအစီအစဉ်များအပေါ်။ ဥပမာ, အကြီးတန်းမန်နေဂျာတစ်ဦးအလုပ်ရနိုင်ကြသည် သူတို့နှင့်အတူ။ ကောလိပ်များတစ်ဦး CEO နဲ့ VP အဖြစ်ပင်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအမှုဆောင်အရာရှိဘယ်နေရာမှာမဆိုအလုပ်ကိုကျေးသွန်သင်ရှာတွေ့နေကြပါတယ်။
ဒါကကုမ္ပဏီကိုက်ညီ ခေါင်းဆောင်များ လက်ျာဘက်ကျောင်းများအတူ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီကုမ္ပဏီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Top-rated ကျောင်းများနှင့်အတူထူးခြားတဲ့မန်နေဂျာကိုက်ညီနှင့်ပင်ပိုမိုမြန်ဆန်ကြီးထွားဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးသောကွောငျ့ အလွန်ကြီးစွာသောခေါင်းဆောင်ရဲ့အရာခပ်သိမ်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယ်အရာကိုအခြားမည်သူမဆိုထင်၏။
ဘယ်နေရာမှာမဆိုသွန်သင်ချက် အတိုင်ပင်ခံကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသိများများမှာ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုလူတွေကိုချိတ်ဆက်နေသည်ဆုံးမဩဝါဒ ပေး. ကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှင့်ဤကုမ္ပဏီကအကောင်းဆုံးနည်းစနစ်ရှိပါတယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလက်ျာလူတစ်ဦးကိုငှားရမ်းရန်။ ဆရာသကဲ့သို့သင်တို့ဒါ သင်ဤကုမ္ပဏီနှင့်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီစဉ်စတင်နိုင်ပါသည်.
ကမ္ဘာတဝှမ်းအသစ်ကျောင်းများကသူတို့အကိုင်းအခက်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ သင်တစ်ဦးသည်အလွန်ကောင်းစွာပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကဒီကနေလည်းအကြိုးပွုနိုငျသညျ။ သင်အမှန်တကယ်လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှသူတို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ဖြစ်ပါတယ် သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်.
ဘယ်နေရာမှာမဆိုသွန်သင်ချက် ရေတွင်းတစ်တွင်း-operated အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါအမှန်တကယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးနှင့်အတူ စုဆောင်းမှုအထူးကု။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်လွဲချော်မည်မဟုတ်ပါသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ အနာဂတ်ပြည်ပရှိအဖြစ်၎င်းတို့၏ကွန်ယက်နှင့်၎င်းတို့၏တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကိုင်းအခက်ဆုံးသောအရနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
သေချာအလိုတော်အဘို့ဤကုမ္ပဏီသောကြောင့် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တော့မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, က်ဘ်ဆိုက်များနှစ်ဦးစလုံး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာဖွေနေကြသူ။ Up ကိုတက္ကသိုလ်သို့မဟုတ် MBA ဘွဲ့ရကျောင်းကအဖြစ်အလုပ်ရှင်ရန်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးမိ၌ဤ, ဃနှင့်တကွသင်လျှင် လာမယ့်ဝါရင့်အနေအထားရှာဖွေနေ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ပေးဖို့ကြိုးစားပါနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်ထဲမှာနေရာချရမည်။ ဘယ်နေရာမှာမဆို website ကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. တွင်သင်သည်သူတို့၏ nextsenior.executive ရှာနေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းများတွင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်သင်ကအကောင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီရှာဖွေနေလျှင်။ သွန်သင်ချက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရှာလိုရသည် ယူအေအီး၌ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများ။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ website မှာကြည့်ရှိသည်နှင့် အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေစောင့်ရှောက်။ အထူးသဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ, ဥရောပနှင့်အမေရိကန်။ သငျသညျကျိန်းသေသှနျသငျဘယ်နေရာမှာမဆိုကုမ္ပဏီသူတို့နှင့်အတူရနိုင်။ အခြို့သောအမှု၌သူတို့ကိုအီးမေးလ်ပေးပို့ပါ ပိုပြီးအဘို့အတောင်းဆိုမှုနှင့်အတူ သတင်းအချက်အလက်ကိုအပိုင်းပိုင်း။ အမှု၌သင်တို့ဖြစ်ကြပါလျှင် အိန္ဒိယကနေဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များများအတွက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြား blog post: သွားရောက်လည်ပတ်ပေးပါ။
အဆိုပါတံဆိပ်၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်။ သင်တို့သည်လည်းရှာသင့်တယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများသည်။ ဥပမာအား Naukri, Monster နှင့် CareerJet.com ကုမ္ပဏီ။ အများကြီးရှိပါတယ် အဲဒီမှာအလုပ်နေရာလွတ်။ စိတ်၌ဤအတူသစ်ကိုအလုပျသမားနိုင်ကြသည် အများကြီးပိုမြန်အလုပ်တစ်ခုရဖို့.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ယခုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်ရနိုင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။